Semalt Expert Anowedzera paIndaneti Data Extraction Tools
Kugadziriswa kwewebhu kunosanganisira chiito chekuunganidza dhidhiyo yedhidhi uchishandisa web . Vanhu vanoshandisa zvibhuku zvekutsvaga zvinyorwa zvewebsite kuti vawane ruzivo rwakakosha kubva kune webhusaiti iyo inogona kuwanika kune kutengeserana kune imwe nzvimbo yekuchengetedza motokari kana dhesi rakasara. A web scraper software isiri iyo inogona kushandiswa kukwakuka nekukohwa ruzivo rwewebsite semuchina wezvigadzirwa, nzvimbo yose yewebhu (kana zvikamu), zvinyorwa pamwe nemifananidzo. Iwe unogona kukwanisa kuwana chero zvinyorwa zvewebsite kubva pane imwe nzvimbo asi pasina API yepamutemo yekutarisana nedharedhi yako.
Muchikamu chino SEO, pane zvidzidzo zvinokosha izvo zvishandiso izvi zvekushandiswa kwemasayiti yebindu rekushandisa zvinoshanda. Iwe unogona kukwanisa kudzidza nzira iyo spider inotora nzira yekucheka kuchengetedza dhidhiyo ye data nenzira yakarongeka yewebsite yekuunganidza data - trampolini elastici milano. Tichakurukura BrickSet webhusaiti yekubvisa zvombo. Iyi domain ndiyo inzvimbo-based webhusaiti ine zvinyorwa zvakawanda pamusoro peETGO. Iwe unogona kukwanisa kuita shanduro yePython yokugadzirisa iyo inokwanisa kuenda kunewebsite yeBrickSet uye kuchengetedza ruzivo sezvo deta inosara pahwindo rako. Iyi web scraper inowedzera uye inogona kushandura kushanduka kwemazuva anotevera pakushanda kwayo.
Kuti munhu aite Python web scrapper, unoda nzvimbo yekukudziridza inzvimbo yePython 3. Iyi mamiriro ekugadzirisa ndeye Python API kana Software Development Kit pakuita zvimwe zvezvinhu zvinokosha ye web web crawler software. Pane matanho mashomanana ayo munhu anogona kutevera paanoita chigadziro ichi:
Kuumba gadziriro yakakosha
Muchikamu chino, unofanira kukwanisa nekutsvaga mapeji ewebhu webhusaiti zvakarongeka. Kubva pano, unokwanisa kutora mapeji ewebhu uye kubvisa iwe zvaunoda kubva kwavari. Zvirongwa zvepurogiramu yakasiyana zvinogona kukwanisa kuita izvi. Munhu wako anomhanya anofanira kukwanisa kunyora peji imwe chete panguva imwechete, pamwe nekukwanisa kuchengetedza data nenzira dzakasiyana-siyana.
Unofanirwa kutora Chikoro cheScrappy che spider yako. Semuenzaniso, zita redu rekate brickset_spider. Nhamba yacho inofanira kutaridzika seyi:
Nhamba yekodhi iyi inonzi Python Pip inogona kuitika zvakafanana seyetambo:
Tsamba iyi inogadzira zvinyorwa zvitsva. Iwe unogona kuenda kune iyo uye unoshandisa mamwe mirairo sekugunzva kwekubata sezvinotevera: